के यही हो डा केसीको ‘सदाचार’ ? भ्रष्टाचार विरुद्ध अनसन गर्ने केसीकै कारण ४२ करोड गुमायो शिक्षण अस्पतालले !
डा केसी ‘अराजकता’ले जन्माएका अनगिन्ती प्रश्नः १ सय ६५ दिन अनसन बस्दा कति बिरामीले उपचार पाएनन् ? कति विद्यार्थी बिदेसिए ? के यही हो डाक्टरी पेसा ?
निर्माण सञ्चार, समाचार टिप्पणी । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधार मागको नाममा अनसन बस्दै आउँदा ‘अनसन ब्रान्ड’ डाक्टर गोविन्द केसीको पटक पटकको अनसनका कारण अस्पतालले अहिलेसम्म झन्डै ४२ करोड रुपियाँ बढी रकम गुमाएको खुलेको छ ।
उनले अहिलेसम्म टिचिङ अस्पतालमा १ सय ६५ दिन अनसन बसेका छन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका अनुसार प्रतिदिन २५ लाखका दरले आम्दानी हुने गरेको छ ।
हिसाब सहजै निकाल्न सकिन्छ, केसीको अन्दोलनबाट उक्त स्वास्थ्य संस्थाले ४१ करोड २५ लाख रुपिया गुमाएको छ ।
यो रकम लगानी गर्यो भने कोही व्यक्तिले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छ । लोडसेडिङले ग्रस्त मुलुकले कुनै एउटा नगरपालिकालाई लोडसेडिङमुक्त पालिका घोषणा गराउन सक्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न पनि सक्छ ।
भ्रष्टाचारका लागि घुसै मात्र लिनु पर्दैन !
राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहलाई धेरैले आफ्नो अभिष्ट पूर्तिका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनको भनाइलाई सापट लिएर आफ्नो स्वार्थको डिङ हाँक्नेहरुको यहाँ कमी छैन ।
शाहले ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ भनेका थिए । त्यस्तै, आहानै छ, ‘अन्याय गर्ने भन्दा सहने पनि दोषी हो ।’ अर्थात् घुस लिने भन्दा दिने बढी दोषी हो ।
त्यस्तै, गान्धीवादीहरुले भन्ने गरेको कुरा र व्यवहारमा हुने गरेका विडम्बनाबारे पनि हिजोआज बहस हुने गरेको छ ।
भनिन्छ, हिंसा गर्न हतियार उठाउनै पर्दैन । हिंसा मन, वचन र कर्मले हुन्छ ।
विभिन्न रुपमा हिंसाहरु हुने गरेको अधिकारवादीहरुले बताउँछन् । नदेखिने हिंसा तर दूरगामी रुपमा नकारात्मक असर पार्ने हिंसाको उदाहरण दिदा महिला हिंसालाई दिइने गरिन्छ ।
उनले अहिलेसम्म टिचिङ अस्पतालमा १ सय ६५ दिन अनसन बसेका छन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका अनुसार प्रतिदिन २५ लाखका दरले आम्दानी हुने गरेको छ । हिसाब सहजै निकाल्न सकिन्छ, केसीको अन्दोलनबाट उक्त स्वास्थ्य संस्थाले ४१ करोड २५ लाख रुपिया गुमाएको छ
बालहिंसा पनि त्यस्तै कोटीमा पर्दछ । प्रोपोगान्डामा सारै ‘असलियत’ देखिने, तर वास्तविकता अध्ययन गर्दा असली रुप नाँगिने उदाहरणहरु नेपालमा धेरै छन् ।
मिश्र र केसीको सालनाल कहाँ छ ?
पछिल्ला दिनमा पत्रकार रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक आगमनलाई जसरी यस्तै, ‘असलियत’ उदाहरणका रुपमा प्रस्ट्याउने काम गरेका थिए, काँग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले ।
पत्रकार मिश्र हाइटी स्थित एउटा मिसनरी डोनर एजेन्सीको भित्री योजना अनुसार नेपालमा राजनीतिमा प्रवेश गरेको भण्डाफोर उनको चुनाव प्रचार समितिले गरेको थियो ।
हाइटीमा जुन, डोनर संस्थाले मानव हिंसा भड्काउनेदेखि स्थानीय जाति संहार गर्ने काममा भित्री रुपमा संलग्न भएको आरोप अहिलेसम्म पनि उक्त संस्था खण्डन गर्न नसकेको कुरा बाहिर आएको थियो ।
नेपालमा निजी मेडिकल खोल्नै नहुने भन्ने डा केसीको ‘हठ’का पछाडि कुन मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी पठाउने रहेको छ भन्ने कुरा निजी मेडिकल व्यवसायीले पटक पटक भन्दै आएका छन् ।
मेडिकल क्षेत्रमा हुने माफियाकरण रोक्नु पर्छ भन्ने कुरा सही हो, त्यसका लागि मेडिकल कलेजहरुमा भर्ना खुल्ने बेला अनसन बस्ने बानी परेको कुरालाई संयोग मात्रै मान्न सकिन्न ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरुले पत्रकार मिश्र र केसीको सालनाल बारे आशंका गरेका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् ।
यसबारे पछिल्ला खोजमुलक सामग्रीमा तथ्य पस्कने प्रयास रहने नै छ, तर डा केसीबारे केही कुरा भन्नु उचित हुन्छ ।
के डा केसी चाहिँ हैनन् भ्रष्टाचारी ?
‘भ्रष्टाचार’ शब्द हेर्दा, आचारमा भ्रष्ट अर्थात् पतीतलाई भ्रष्टाचारी भनिन्छ ।
त्यस्ता पतीतले गर्ने कर्मको समानार्थी शब्द हो ‘भ्रष्टाचार’ । अर्थशास्त्रीय अनुशासनका दृष्टिले आर्थिक हिनामिनालाई ‘भ्रष्टाचार’ का रुपमा प्रयोग भएको छ ।
जस्तै, करप्सनका ह्वेलकै रुपमा तत्कालीन राजश्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माको चरित्र देखियो ।
यस्तै, सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरु, नेताहरु... खोज्दै जाँदा धेरै ‘बाहिर सन्त भित्र भ्रष्ट’ भएकाहरु नेपालमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ ।
कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिका कारण सरकारी निकायले पाउने राजश्व वा आम्दानी गुम्ने कुरालाई आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले अक्षम्य ‘अपराध’ कै रुपमा लिने गर्छ । किनकि राजश्व राज्यको आम्दानी हो, जसले राज्य चल्ने धमनी भित्र रगतको काम गर्छ ।
धमनीहरुमा रगत पठाउन रोक्ने हो भने, मानिसको अवस्था के हुन्छ ? मृत्यु । त्यस्तै नै हो अर्थशास्त्रीय दृष्टिमा आर्थिक भ्रष्टाचार ।
डा केसीकै कारण अस्पतालहरुले कति आम्दानी गुमाए ?
कति जना इमर्जेन्सी उपचार पाउनु पर्ने बिरामीले उपचार नपाई मरे होलान् वा छटपटिएर सकस व्यहोर्नु पर्यो होला ? कति रकम स्वदेश पढ्न छाडेर बिदेसियो होला ?
यस्ता गम्भीर विषयमा भन्दा पनि भोक हड्ताल बसेकै नाउँमा सरकारी भत्ता खाएर सरकार विरुद्धै अनसन बस्ने डा केसीबारे सोध्न मन लागेको छ ।
कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिका कारण सरकारी निकायले पाउने राजश्व वा आम्दानी गुम्ने कुरालाई आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले अक्षम्य ‘अपराध’ कै रुपमा लिने गर्छ । किनकि राजश्व राज्यको आम्दानी हो, जसले राज्य चल्ने धमनी भित्र रगतको काम गर्छ । धमनीहरुमा रगत पठाउन रोक्ने हो भने, मानिसको अवस्था के हुन्छ ? मृत्यु
डा केसीज्यू, सरकारी जागिर खानु अघि तपाईले सरकारी पत्रमा गरेको हस्ताक्षर र त्यहाँ उल्लिखित आचार संहिताले तपाईलाई सरकारी हुण्डी खाएर सरकारी सेवा नै अवरुद्ध गर्ने मिल्ने बताएको छ ?
यो चाहिँ भ्र्रष्टाचार हुँदैन ?
तपाईकै कारण उपचार गर्न हस्पिटल पुगेका बिरामीहरुले उपचार नाएको कुरा अर्थात् बिरामीहरुको अधिकार हनन गरेको कुरा तपाईको कुन शास्त्र भित्र सही हो भनेर लेखिएको छ ।
तपाईको अनसन त फेसन भइसकेको छ, न कुनै हप्ता न कुनै महिना वा तिथि मितिमा निर्धारित छ ।
जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेलै जति पटक मन लाग्यो त्यति पटक अनसनका नाउँमा अस्पतालका सेवाहरु अवरुद्ध गर्दा तपाई चाहिँ सादचारी ब्राह्मण भइरहने कुन विधि शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ ?
किन गरिदैन तार्किक बहस ?
संघीय राज्य बन्नु (करिब ६ वर्ष) अघि बनेको माथेमा आयोग नेपालको संघीय संरचनामा कति सुट हुन सक्ला भन्ने बहस किन गरिदैन ?
नेपालका मेडिकल कलेजहरु किन गुणस्तरीय छैनन् ? किन पूर्वाधार बिना नै खोलिएका छन् ? त्यस्ता पूर्वाधार पूरा नगरी पहिलेकै सरकारले खोल्न अनुमति दिइएका दर्जनौं मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्नेबारे किन उठाइन्न कुरा ?
खाली बहस मोड्ने यस्ता खेल भित्र कस्को छ भित्री हात ? आखिर लोकतन्त्र हो, विधि र प्रक्रियाहरु विभिन्न छन् भन्ने जान्दाजान्दै दुनियाँलाई बिलखबन्द नै बनाउनु आफैंमा अराजकताको चरम हो ।
मानोपोली खेतीले जहिले पनि अतिवाद जन्माउँछ । डा केसीको फेसनेबल अनसनले जबरजस्त अर्काे पक्षलाई पनि अराजक बनाउँदै गउको तथ्यले यही भन्छ ।
के केसी भोक भोकै हड्ताल बस्ने गरेकै छन् ?
डा केसीको सादाचारी जिन्दगीबारे धेरैले धेरै राम्रा राम्रा र पक्षमा तर्क राख्न सक्लान् । राख्न पाउँछन् । तर, जब ‘हठधर्मिता’ले अतिको रुप लिन्छ, पक्षमा तर्क गरिन्छ भने, त्यहाँ विपक्षमा पनि तर्क गर्न पाइन्छ ।
आखिर यो धर्ती हो । स्वर्ग होइन । यहाँ २–४ छाक नखाइ बस्न सकिएला तर, ४८–५० छाक नखाएको मानिस एकादशी व्रत बस्ने जतिको पनि गलेको देखिदैन
लोकतन्त्रको यही सुनौलो पक्षलाई उपयोग गर्दै सुनौलो बहस मेडिकल क्षेत्रमा किन भइरहेको छैन ?
जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरमा २०–२२ दिनसम्म आमरण अनसन बसेका भनिएका डा केसी सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइए ।
तर, रोचक कुरा के छ भने उनी खटिखम्बार न्युज एजेन्सीहरुमा अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए । चर्काे चर्काे स्वरमा बोलिरहेका थिए ।
उनका आँखा र चेहेरामा हुने ‘पन’को पाटो हेर्दा उनी कहिलै पनि नखाएजस्ता देखिदैनथे ।
आखिर यो धर्ती हो । स्वर्ग होइन । यहाँ २–४ छाक नखाइ बस्न सकिएला तर, ४८–५० छाक नखाएको मानिस एकादशी व्रत बस्ने जतिको पनि गलेको देखिदैन !
यसका पछाडि रहस्य के छ ? के यो खोजीको विषय हैन ? आमरण अनसन सलाइन चढाएर गरिन्छ कि, अत्यावश्यक केसमा मात्र सलाइन लिइन्छ ?
किन उनलाई चेक गर्ने डाक्टरहरु उनैले छानेको हुनु पर्छ ? अनसन क्रममा किन उनलाई खास समयमा गोप्य तरिकाले खास डाक्टरहरुले नै चेकजाँच गर्नु पर्छ ?
फुड सप्लिमेन्ट्री खाएर, अथवा बिहान बेलुकी मौका मिलाएर त्यस्तै ‘खास वस्तु’ सेवन गरेर अनसन बस्नेलाई साँच्चिकै अनसनकारी भनिरहन मिल्छ ?
केसी अनसन अब नबनोस् फेसन ?
केसी शैलीले दुनियाँ बदलिन्थ्यो भने विश्वमा अर्थशास्त्रीहरुले नोबेल पुरस्कार लिन पुस्तक र चिसर्च गर्नु पर्ने थिएन सुशासन र लोकतन्त्रका लागि ।
उनले गरेका अनसनका लागि चाहिने खर्चसमेत अस्पतालबाटै हुने गरेको छ । डाक्टर केसीले २०६९ साल असार २१ गतेबाट अनसन सुरु गरेका हुन ।
राजनीतिको नैतिकता पनि कति हदसम्म, कि आफ्नो सरकार हुँदा (जस्तै काँग्रेस नेतृत्वको सरकार हुँदा स्व. सुशील कोइरालाको पालामा ३ र शेरबहादुरको पालामा ३ गरी ६ पटक) अनसन बस्दा उनको माग सम्बोधन नगरेको काँग्रेस सरकार यतिबेला उनको माग उछालिरहेको छ ?
त्यसयता उनले अहिलेसम्म १ सय ८६ दिन अनसन बसेका छन् । जसमध्ये २० दिन जुम्लामा अनसन बसेका हुन् । बाँकी १ सय ६५ दिन डाक्टर केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रोजेका छन ।
हिजोबाट केसी सोही अस्पतालमा अनसनमा छन् ।
अस्पतालमा कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्न पाइन्नँ । नेपाल मात्र यस्तो छाडा देश हो जहाँ सरकारी कर्मचारीहरु सरकार विरुद्ध नै आन्दोलनमा उत्रन्छन्, र आफ्नो कुत्सित सर्तका लागि सरकारलाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाउने गर्छन् ।
त्यसमा आत्मरित लिन बानी परेका हामी नेपालीहरु तिघ्रा ठटाउँदै, ताली बजाउँदै तमासे बन्छौं, र लोकतन्त्रको गुदी भनेकै यही हो भन्ठान्छौं ।
यही बुद्धि भएरै होला, सही अर्थमा मुलुकले लोकतन्त्रको अभ्यास नगरेको ? यदि यस्तै बुद्धि थिएन भने, नेपालमा पटक पटक एउटै नेताले जित्ने, गन्दै गरेको भोट बक्सहरु थुतिने र हानिने ।
जस्तै चितवन भरतपुरमा भएको थियो ।
अनि, कागले कान नलगेपछि लग्यो भनेपछि हाहाकार गरेर दौडने मुलुक बनेको हो नेपाल ! आश्चर्य लाग्दैन, जुन देशमा एउटा सडक अनुशासन राम्रो छैन, त्यहाँ सुशासनको डिङ हाँक्न सत्तासीनहरु कहिलै पछि पर्दैनन् ।
अर्थात्, हिजोको एमाले वा नयाँ शक्तिका हकमा पनि यो कुरा यस्तै रुपमा किन लागू हुन्छ ? र, सरकारमा गएपछि चाहिँ उसैलाई किन अनसन बस्न प्रेरित वा बाध्य गरिन्छ ?
राजनीति गर्नु छ भने देऊ राजिनामा !
डाक्टर केसीले त्रिविको नियम र अनुशासन मन्दिनँ भन्नु अराजकता हैन ? किन दिदैनन् उनले राजिनामा ? उनलाई यतिको हाइहाई हुनु छ, नेता बन्नु छ भने राजिनामा दिएर राजनीतिमा उत्रिए त भैहाल्यो त !
अबको लोकतन्त्रमा त कुनै व्यक्ति जन्मजात राजा वा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान त छैन !
त्रिवि, जसको तलब खाएर, उसकै नियम मान्दिन भन्दै आफू अनसन बस्ने र एप्रोन लगाएर अफ्ना विद्यार्थीलाई अस्पतालभित्र जुलुस लगाउन लगाई बिरामीको स्लाइन थुत्न लगाउनेसम्मको काम गर्दा डा केसी सदाचारी नै भइरहन्छन् कसरी ?
अस्पताल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार त्रिविले दैनिक बिरामीलाई सेवा दिएबापत्त २५ लाख रुपिया संकलन गर्दै आएको छ । केसीको अनसनले अस्पताल नै धरासायी बनेको छ ।
‘डाक्टर केसीको आन्दोलन त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई निकै महंगो सावित भएको छ, उहाँ आफू अस्पतालको कुनै नियम मान्नुहुन्न, उहाँको आदेश राणाकालिन चन्द्र शमशेरको जसरी सवैले मान्नुपर्छ,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले भने ।
केसीको विभागको हालतको जिम्मा लिने को ?
उनका अनुसार केसीको हाडजोर्नी विभागमा अहिले पनि बिरामीले शल्यक्रियाका लागि कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्छ ।
सो बिभागमा काम नगर्ने, अन्य चिकित्सकलाई समेत काम गर्न नदिने भएको कारण हाडजोर्नी बिभागका अधिकांश बिरामी महंगो मुल्य तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन ।
‘मेडिकल मफियाको स्वार्थमा डाक्टर केसीले आफ्नै अस्पताल बर्वाद बनाए, उनको समर्थकले एक पटक डाक्टर केसीले सेवा दिने हाडजोर्नी बिभाग हेर्दा सवै जानकारी हुन्छ,’ ती चिकित्सकले भने, ‘नेपालका गरिब जनताले स्वास्थ्य सुविधा पाउने अस्पताललाई बर्बाद बनाए ।’
के केसीको यो चरित्र उच्च नैतिकता र सम्मानजनक सदाचार हो ?
केसीको लिँडे ढिपीकै कारण भगवान कोइरालाले छाडे शिक्षण अस्पताल !
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा सुधारका लागि गठित केदारभक्त माथेमा अयोगका सदस्य समेत रहेका डा भगवान कोइरालाले पनि केसीका कारण आफू त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशकबाट राजिनामा दिएर हिड्नु परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन ।
डाक्टर केसीका समर्थकले स्लाइन समेत थुतेर फाल्ने, अस्पताललाई अराजक भीड बनाउने अपराध भएपछि आफू मन थाम्न नसकी हिडेको कोइरालाको भनाई छ । डाक्टर केसीले अनसन थालेपछि सरकार परिवर्तन लगत्तै आफ्नो अनसनको व्यापार अघि बढाएका हुन ।
अनसन ब्रान्डका अनसन फेहरिस्त !
२०६९ आषाढ २१ गते देखि अनसन सुरु गरेका डा केसीले पहिलो र दोस्रो अनसन डा बाबुराम भट्टराई, तेस्रो र चौथो अनसन खिलराज रेग्मी, पाचौं, छैटौं र सातौं अनसन शुशिल कोइराला, आठौं अनसन केपी शर्मा ओली, नवौं र दशौं अनसन पुष्पकमल दाहाल, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनसन शेरबहादुर देउवा गरी सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा बसिसकेका छन् ।
अनसन बस्नु उनको लहड हो ।
विगतमा डा केसीलाई अनसन बसाएर नेपालमा अस्थिरता सृजना गर्दै नेपालका विद्यार्थीहरुलाई विदेश पठाएर कमसशन खान पल्केका गिरोह आज डा केसीको माध्यमबाट सुशासनका लागि अघि बढ्ने सरकार विरुद्ध अवरोध सिर्जना गर्दै छन् ।
आखिर यो खेलको पर्दापछाडि नराम्रो नाटक मञ्चन भइरहेको छ ?
दुई तिहाइ प्राप्त सरकार पनि कमजोर भएको देखाएपछि आउने दिनमा नेपालमा विगतकै जस्तै अस्थितर र कमजोर सरकार बनिरहोस् भन्ने चाहने तत्त्वहरुले डा केसीहरुलाई मोहरा बनाएर अनसन रुपी बम पड्काउने गरेका छन् । यसमा सबैले बेलैमा सोच्नु राम्रो होला ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनु पर्छ भन्नेहरु नै यसरी निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा रोक्ने वा निजी क्षेत्रलाई संलग्न हुनै दिन नहुने मागका पछाडि दौडिरहेको देख्दा सबैभन्दा दिवालीयापन देखिन्छ नेपाली काँग्रेसमा । प्रतिपक्षी भयो कि केसीलाई उचाल्ने हो भने यस्ता राजनीतिक दलले मुलुक कसरी उँभो लगाउलान् ?
कुनै पनि सरकार पूर्ण बहुमतको बनोस् र उसको समय भर निर्भक भएर काम गर्न सकोस् भन्ने सोच नराख्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्र सिद्धिने छ ।
सिद्ध्याउन चाहनेहरुले लाभ लिने छन् । त्यस्ताहरुको मोहरा नबनून् डा केसी जस्ता ‘अराजक’ वितण्डावादी अनसन ब्रान्ड !
शुक्रबार, ४ साउन, ०७५